Ajụjụ ọnụ: Onye isi mmadụ Centipede II Tom isii na -ekwu okwu nka nka na -eme ka ndị egwu pụọ - Pop Omenala
Ajụjụ ọnụ: Onye isi mmadụ Centipede II Tom isii na -ekwu okwu nka nka na -eme ka ndị egwu pụọ
Ụfọdụ ndị na -ese fim na -eji ezi ebumnuche na -emepụta fim ha, ma ọ bụ ọchịchọ nke ịkwalite ndị na -ekiri ha site na akụkọ mkpali mkpali, na -akpachapụ anya n'ihe gbasara ihunanya, ma ọ bụ mee ka ị chịa ọchị nke ukwuu. Ọbụlagodi ezigbo ndị nna egwu, mara maka ndị na-ege ntị na-adịghị mma karịa ịkasi ha obi, nwere mkpali miri emi, na-eji isiokwu okwu na-akpali echiche na-etinye egwu ha. Mgbe ahụ enwere Tom isii , onye nduzi Dutch n'azụ afọ gara aga zeitgeist-infiltrating horror flick Centipede nke mmadụ (usoro nke mbụ) . Ee, nke gbasara dọkịta na -awa ara nke na -atọrọ mmadụ atọ aka ha dị ọcha wee jikọta ha site n'ịnyịnya ibu gaa n'ọnụ. Mgbe ewepụtara ihe nkiri ahụ, isii nwetara aha ọma n'otu ntabi anya; na -enweghị ihe ọ bụla bara ọgaranya, Ọgbọ nke mmadụ naanị ebumnuche ya bụ ịkpata mkparị, ihe isii n'onwe ya ji ọ joyụ nwee na mgbasa ozi.
Maka ihe atụ, Human Centipede II (Usoro zuru oke) (na -akụ ihe nkiri IFC na IFC etiti abalị s Video On Demand today), isii bidoro igosi na o mere ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe n'oge ikpeazụ; ugbu a, dị njikere ịta ntaramahụhụ (yana ikekwe titillate, dabere na akwụkwọ mmado ọhụrụ sexy na -arịa ọrịa nke na -egosipụta ụdị ịgba ọtọ). Ime ka onye bu ya ụzọ yie ihe nkiri dị aghụghọ site na ntụnyere, Ọgbọ mmadụ nke Abụọ na-amị ụtọ nke ọma site na ntughari ruo na njedebe.
N'ihe mgbagwoju anya meta, ihe nkiri ahụ hiwere isi na -ama jijiji, Martin ( Aha ya bụ Laurence Harvey ), onye echiche ya karịrị akarị Ọgbọ nke mmadụ na -eme ka ọ na -eme ka ndị na -amabughị ndị ọbịa kpuchie isi ha, jide ha n'ime ụlọ nkwakọba ihe a gbahapụrụ agbahapụ, wee mepụta centipede nke ya okpukpu anọ karịa ụdị ihe nkiri Sixs. Naanị, Martins enweghị ọzụzụ ahụike na-eduga n'iji stapler maka ibe ọnụ ịnyịnya ibu, na usoro niile, n'ozuzu ya, bụ ihe nzuzu na ọbara. Na isii, na -enwekwaghị mmasị ịpụta ihe ngosi, na -egosi onyogho ọ bụla jọgburu onwe ya, gụnyere ezé na -eji hama wee kụọ ya, kpụchapụ ikpere ya, ka a na -awụpụkwa fecal n'ime ọnụ.
Enwere ajụjụ ọ bụla maka ihe kpatara ya Ọgbọ mmadụ nke Abụọ kpaliri ndepụta fim anyị ị nweghị ike ịhụ? Enweghi ike ihichapụ ihe onyonyo na-adịghị mma n'uche anyị, anyị gwara onye isi ọhụụ ihe nkiri na-eme ka ọ ghọta ihe na-eme. Na, ị maghị ya, ọ bụ ezigbo enyi enyi! Ọ dị mma, nwoke nwere omume enyi na -enwe ọhụhụ na -emegbu ndị na -ege ya ntị.
N'ajụjụ ọnụ Matt Barone ( @MBarone )
Ihe mgbagwoju anya: N'agbanyeghị ụdị ọrịa ọ na -arịa Ọgbọ mmadụ nke Abụọ nwere ike ịbụ, ọ na -ewe ụdị nka pụrụ iche iji mee ka ndị mmadụ banye na fim ahụ tụọ ụjọ ma maa jijiji, yabụ, nke mbụ, anyị ga -aja gị mma na nke ahụ.
Tom isii: N'ezie, na ọ siri ike ime nke ahụ. Nke mbụ bụ ihe gbasara mmụọ, yabụ na nke abụọ, aghaghị m igosi ya ihe niile, n'ihi na nke ahụ bụ ihe ndị na -ege ntị rịọrọ. Mgbe m na -ede edemede nke mbụ, enwere m ọtụtụ echiche mana enweghị m ike itinye ha niile n'otu fim - ọ bụ ya mere m ji chọọ ịme ụdị ihe nkiri. Maka nke mbụ, achọrọ m ka ndị na -ege ntị buru ụzọ mara echiche a na -arịa ọrịa, yabụ na ọ bụ ya mere ihe niile ji na -eme n'isi, ọ ga -esiri gị ike ịhụ ihe ọ bụla jọgburu onwe ya. Mana amaara m ndị na -ege ntị maka akụkụ nke abụọ a chọrọ ka m hụ ihe na -efegharị na gore, yabụ echere m na m ga -enye ya ndị na -ege ntị na nke abụọ. Ya n'ezie n'elu-na-na ikwubiga okwu ókè.
Tupu ịme nke mbụ, ọ bụ echiche mbụ maka usoro nke inwe ya ka ọ bụrụ meta, gbasara onye na -akwado ya, ma ọ bụ nke ahụ mere mgbe Ọgbọ nke mmadụ gbapụrụ?
Ma ya, n'ezie. Eji m echiche ahụ na -egwuri egwu, n'ihi na echiche m bụ, Kedu ihe dị egwu karịa dọkịta na -awa ahụ na -awa ahụ na imepụta centipede? Echekwara m, Scarier ga -abụ ma ọ bụrụ na mmadụ emee ya na -enweghị ezigbo ahụike ọ bụla. Nke ahụ kadị njọ. Yabụ na m na -eche maka onye na -akwado ya ma ọ bụ ihe, mgbe ahụ mgbe m gara ụwa niile maka ememme na ihe, ọtụtụ mmadụ sitere na ndị na -ege ntị jụrụ m, Gịnị ma ọ bụrụ na onye ọka iwu nọ ebe ahụ detuo echiche gị? Ma amaara m nke ọma na nke ahụ ga -abụrịrị echiche maka usoro a.
Mgbe ị malitere ide usoro nke a, enwere onye ọ bụla na -akwado ya n'uche nke kpaliri agwa Martin?
[ Ọchị .] Ịkwalite ihe nkiri dị ka nke a, ị ga -ezute ndị dị iche iche; ya dị ịtụnanya. N'ezie iju ndị. Na Fantastic Fest premiere, otu nwoke bịakwutere m wee sị na m bụ Jizọs maka ya, ndị ọzọ m zutere ekwuola na ha na -atụ egwu ile m anya, na ọ ka m njọ karịa Hitler. Yabụ, ọ bụ ụdị mmadụ sara mbara nke m na -ezute.
Mana ahọpụtara m agwa Martin n'ihi na achọrọ m n'ezie na ngụkọta nke Dr. Heiter [dọkịta na -awa ahụ Ọgbọ nke mmadụ , nke Dieter Laser na -akpọ], onye dị ogologo ma dị gịrịgịrị; oge a, achọrọ m nwoke dị mkpụmkpụ na abụba. Nke ahụ bụ echiche m, mgbe ahụ, ee, ọ bụrụ na onye na -akwado iomi echiche a, mgbe ahụ ọ na -enwe nkụda mmụọ. N'ime edemede ahụ, achọrọ m nwoke nwere isi mgbaka nke dị mkpụmkpụ na abụba. [ Ọchị .] Nke ahụ bụ echiche m.
Kedu ka ị ga -esi hụ Laurence Harvey ka ọ kpọọ Martin? Ọ bụ nnukwu nhọrọ nkedo - ọ masịghị ndị na -ege ntị, mana ọ chọghịdị ikwu okwu iji wepụ onye na -ekiri ya.
Ọ dị ịtụnanya, ee. Emere m nkedo na London, ahụkwara m ihe dị ka ụmụ okorobịa asatọ, o wutekwara m nke ukwuu. Mana Laurence batara, echere m, Chi m! Nwoke a yiri ihe ịtụnanya! Anyị tinye igwefoto n'ihu ya, anya ya dịkwa…. Ee. Ọ nwere charisma dị ịtụnanya na enyo. Ahapụrụ m ya ka ọ mee ihe na -eme ihe ma o mere ya nke ọma; obi abụọ adịghị ya na m ga -ahọrọ ya. Ya na Dieter nọ ebe ahụ, echere m.
Kedu ihe na -abanye n'ime nyocha iji kpọọ agwa na -arịa ọrịa dịka Martin?
Nke mbụ, etinyere m igwefoto n'ihu ya ma hapụ ya ka o jiri agwa nne mee ụfọdụ ihe, ka ọ hụ ihe ọ ga -eme na nke ahụ. Mgbe ahụ, ajụrụ m ya ka o were igwe mmadụ were isi wee banye ụfọdụ mmadụ, o wee mee nke ahụ na -ekwenye ekwenye nke ukwuu - ihu ya gbanwere ọbara ọbara, ọ nwere ike jiri ahụ ya gwuo egwu n'ezie. Ma, n'ezie, maka ọnọdụ mmeko nwoke, ajụrụ m ya ka ọ kpọọ nke ahụ, ọ jidere oche wee dinaa oche ahụ nke ukwuu nke na m chere, Nke a bụ nwoke anyị. [ Ọchị .]
Enwere m ike iche n'echiche na hel agaghị eme nke ahụ ọzọ na nyocha ọ bụla n'ọdịnihu.
[ Ọchị .] Enweghị m olileanya.
Martin ekwughị otu mkpụrụ okwu n'ime ihe nkiri ahụ niile. Kedu ihe kpatara o ji dị mkpa na agwa ahụ gbachiri nkịtị?
Echiche mbụ m bụ na agwa ahụ ga -ekwu ahịrị sitere na ihe nkiri mbụ, site n'aka Dr. Heiter. Echiche m bụ ka ọ kpachapụ ahịrị ndị ahụ mgbe ụfọdụ, mana mgbe ahụrụ m Laurence na eserese ahụ, ọ naghị ekwu okwu ma echere m na ọ na -atụ ụjọ karịa ma ọ bụrụ na ọ naghị ekwu okwu. Ọ dị egwu karịa, echere m na ọ naghị ekwu okwu.
Nhọrọ ọzọ na-atọ ụtọ n'ezie maka ihe nkiri a bụ igosi ya na oji na ọcha. Kedu usoro echiche dị n'azụ nke ahụ?
Achọrọ m kpam kpam ka ihe nkiri a dị 100% pụọ na akụkụ nke mbụ. Akụkụ nke mbụ nwere agba ụlọ ọgwụ, ihe onyonyo na -akwụkwa ọtọ, na akụkọ ya n'ezie bụ Dr. Heiter; Maka usoro nke a, achọrọ m ile anya gbara ọchịchịrị, ihe nkiri nke ruru unyi na aka ya niile. Agba ojii na-acha ọcha na-enyere akụkọ Martin aka, ọ na-enye gị ahụ erughị ala. Ọ bụrụ na anyị mere fim ahụ na agba, ọ ga -adọpụ uche nke ukwuu na akụkọ ahụ, echere m.
Anya ojii na ọcha na-enye ihe nkiri ahụ ezigbo Eraserhead na -eche, ọkachasị ebe Martin nọ n'ime ụlọ ya na nne ya na dọkịta ya. Ntọala ụlọ a dị egwu sitere na ihe nkiri David Lynchs.
Ee, maa. Ahụrụ m fim ahụ n'anya - ihe nkiri ahụ metụtakwara m.
Ọgbọ mmadụ nke Abụọ anaghị egbu oge ọ bụla ịbanye na ime ihe ike na ọrịa, ebe ihe nkiri nke mbụ nwekwuru ihe nrụpụta tupu o gosipụta oke ya niile. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya agaghị enye ndị na -ege ntị ohere ọ bụla ịchịkọta onwe ha na fim ahụ dum?
Enwere m mmasị na fim na -aga dị ka ụgbọ oloko na anaghị akwụsị. Ọ dị ka ike a na -agaghị akwụsị akwụsị, nke ahụ na -emepụta ụdị mmetụta rollercoaster maka ndị na -ege ntị. Ihe ọchị bụ ụdị mgbapụ; Anaghị m ama ụma ede ihe ọchị na edemede ahụ, ọ bụ naanị ụzọ m si eche echiche. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịchị ọchị n'ezie n'oge, dịka, ọnọdụ ihere, na nke ahụ bụ ntọhapụ maka ha, echere m.
N'oge nlele m gara, onye ọ bụla nọ na -achị ọchị ruo ebe ahụ ebe a na -adọba ụgbọala ya na nwa na -ebe akwa - nke ahụ yiri ka ọ bụ isi, OK, nke a abụghị ihe ọchị ọzọ. Ọ bụ naanị ihe na -enye nsogbu dị ka hel. Ọdịiche a na -atọ ụtọ nke ikiri ihe ị na -ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ị kwesịrị ịchị ọchị wee hụ ihe ị na -ekwesịghị ịchị.
Nke ahụ dị n'aka onye na -ekiri ya, n'ihi na Ive nwere ọbụna ndị mmadụ na -achị ọchị mgbe nwatakịrị ahụ nwụrụ na njedebe. Yabụ ajụjụ a bụ etu ị siri rịa ọrịa n'onwe m, echere m. Ekwesịrị ikwu ya, n'ihi na Ive hụkwara ka ndị mmadụ na -ele ihe nkiri ahụ na -asọ oyi na ha kpọrọ ya asị - ha enweghị ike ịchị ọchị. Yabụ na ọ bụ ihe siri ike ikwu ebe ndị mmadụ kwesịrị ịchị ọchị n'oge ihe nkiri a.
Ego ole ka ụgbọala n'azụ Ọgbọ mmadụ nke Abụọ nọ na -ele ndị na -ege ntị na -asị, O nwere ike ị gaghị eche na nke mbụ gara nke ọma, mana ugbu a ị ga -enweta ya. Olileanya na ị dịla njikere.
Ee, ọ bụ mmeghachi omume ọha na eze. Kpamkpam. Na ụzọ abụọ; otu, ndị na -ege ntị rịọrọ ihe ọzọ ma chọọ karịa, wee sị, Nke mbụ bụ maka ọtụ -anyị chọrọ ịhụ karịa. Yabụ na m were ya nke ukwuu nke ugboro abụọ maka ndị na -ege ntị. N'ọnọdụ ndị ọzọ, enwetara m ọtụtụ iyi egwu ọnwụ n'ihi akụkụ nke mbụ; ha siri, Gi onwe -gi n degmeru madu. A ghaghị ịkwụsị gị. E nwere ọtụtụ egwu ọnwụ na Facebook.
Enwetara m ozi ịntanetị site n'aka ndị mmadụ n'akụkụ ụwa niile na -arịọ ka m bata Ọgbọ nke mmadụ , na ụfọdụ chọkwara iri ezigbo sh*t.
Ive na -ekwukarị, Gee ntị, ụmụ okorobịa: ọ bụ naanị ihe nkiri. Ihe na-eme ya, ọ bụghị n'ezie. Ịchọrọ ịhụ ihe nkiri egwu, ọ dị mma? Ya mere i kwesịrị tụọ anya ihe dị egwu, ma ọ bụghị na ị gaghị ahụ ihe nkiri egwu. N'akụkụ nke abụọ, a na m ewere echiche ahụ wee gbasie ike, maka ndị ahụ na -asị na ha chọrọ igbu m maka akụkụ nke mbụ; ugbu a, m na -ekwu, Ka anyị hụ akụkụ nke abụọ, wee gwa m ihe ị chere mgbe ahụ. [ Ọchị .] Ọ dịkwa oke elu n'oge a ka ndị mmadụ kwesịrị ghọta na ọ bụ ihe nkiri. Apụghị m iche na onye ọ bụla ga -ahụ akụkụ nke abụọ wee were ya kpọrọ ihe ọzọ. Ọdịmma ya dị oke egwu nke na ọ na-adị elu karịa.
Ike niile nke onye a yiri ka ọ na -elekwasị anya naanị ịwakpo onye na -ekiri ya na sekọnd ọ bụla.
Kpamkpam, na ọtụtụ mmadụ na -eji ya akpọrọ ihe. Echere m na ụdị ihe nkiri ndị a bụ naanị ihe ntụrụndụ, ọ bụrụ na ị dị njikere maka ịnya ụgbọ ịnyịnya na ịchọrọ iju gị anya, mgbe ahụ ị ga -ahụ ihe nkiri a n'anya, ikekwe. Ọzọkwa, agụrụ m ọtụtụ nyocha banyere ihe nkiri a, na Ive gwara ọtụtụ ndị nkatọ gbasara ihe nkiri a, ọ tụrụ ha n'anya nke ukwuu. Ha enweghị ike ihi ụra n'abalị, yana ihe ndị ọzọ. Mana n'otu oge ahụ, ha dere na ọ na -asọ oyi nke ukwuu maka ndị na -ege ntị na na ọ nweghị onye kwesịrị ịhụ ya. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ihe nkiri a gbasara, ma ọ bụrụ na ị na -eche maka ya. Nke a bụ ihe ị rịọrọ - ị nwere ike ijikwa ya?
Ọdịda nke ahụ, Id chere, bụ nke ahụ Centipede aha ọma na -ewepụ nkà gị dị ka onye na -ese fim. Site na usoro nke a, ọkachasị, enwere ụfọdụ ihe ngosi na -atọ ụtọ nke ukwuu, mana ọ bụghị ọtụtụ nyocha na -egosi nke ahụ. Nke ahụ ọ na -enye gị nsogbu?
Ihe nkiri a n'onwe ya ghọrọ ụdị nkwanye ugwu, na ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ naanị ụgbọala na-adọkpụ maka ihe nkiri nke mbụ na okwu ọnụ na-agbasa ebe ndị na-ahụbeghị ya na-asị, Oh, nke ahụ bụ ihe na-asọ oyi karịa! Mana mgbe ha hụrụ ihe nkiri ahụ, ha chọpụtara na onweghị ihe ọ bụla gor; naanị hype gbara ya gburugburu mere ka ọ buru nnukwu ibu. Dị ka onye na -ese ihe nkiri, ọ bụ ihe siri ike ịza ajụjụ. Onye edemede ọ bụla ma ọ bụ onye na -ese ihe nkiri nke na -eme akwụkwọ nke abụọ ma ọ bụ ihe nkiri nke abụọ - nke ahụ bụ ihe kacha sie ike ịme mgbe kụrụ.
Mana achọrọ m ịme ihe nkiri dị iche karịa nke mbụ. Ọtụtụ oge, m na -ahụ ndị na -ese fim nwere ezigbo mbụ wee na -agbalị i copyomi nke mbụ, nke na -adakarị. M kpachaara anya chọọ ime ihe nkiri dịtụ iche, site n'akuku mbụ yana n'ụdị ntuziaka dị iche. Achọrọ m ịhapụ nke ahụ na ndị na -ege ntị wee hụ ihe na -eme, na nzaghachi bụ kpọmkwem ihe m buru n'amụma ga -eme. Ị nwere ogige abụọ: Ha kpọrọ ya asị kpamkpam ma ọ bụ na ha hụrụ ya n'anya. Enweghị ebe etiti.
Mgbe ị na -ede akwụkwọ Human Centipede nke Abụọ edemede, ị kpachibidola onwe gị n'ụzọ ọ bụla? Ma ọ bụ ogo ọ bụla nke obi ọjọọ na ime ihe ike bụ egwuregwu ziri ezi? N'ezie ọ dị ka ị nweghị onwe gị n'ụzọ ọ bụla.
Ee e, ọ dịghị mgbe m na -enyocha onwe m n'ụzọ ọ bụla. Ana m ede ihe dị mma maka akụkọ ahụ. Ana m agbalị iche maka ihe ndị na -ege ntị ga -achọkwa, n'ihi na mụ na nwanne m nwanyị na -eme fim ahụ - agaghị m azaghachi onye ọ bụla ọzọ ma mụ onwe m. Yabụ na m na -eme fim nke m chọrọ ime wee wepụta ya n'ụwa wee hụ ihe na -eme.
N'ime ihe nzuzu niile na -eme na fim ahụ, naanị ihe nkiri na -emeghị nke ọma maka ụdị ndị America bụ ebe Martin dinara mmadụ n'ike nke ejiri eriri eriri wee kechie amụ ya. O juru gị anya na onweghị ihe nkiri ọzọ ahapụrụ n'ụzọ dị otu a?
Nke ahụ bụ n'ihi ime ihe ike mmekọahụ, yana ihe ụwa nwere nsogbu gbasara ya. Mana enwerekwa mba ndị na -enweghị nsogbu na nke ahụ; mba ndị ọzọ nwere mmetụta nke ukwuu.
N'ikwu okwu banyere ịdị nro, mmadụ abụọ si na nyocha m gara. Ha na -aga ụzọ ọpụpụ ozugbo Martin malitere ịtụba ọnụ na ntì ịnyịnya ibu.
[ Ọchị .] Ọ dị mma! Ha wee pụọ, huh? Echere m na ọ bụ otuto. Dị ka onye na -ese ihe nkiri, ị na -anwa ịnya ụgbọ ala rollercoaster, na ịnya ebe a karịrị akarị maka ụfọdụ ndị mmadụ. Peoplefọdụ ndị mmadụ enweghị ike ijikwa ya, mana ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị ịme ihe nkiri egwu. Ndị ọzọ na -eme ihe ọchị, mana m na -eme ihe nkiri egwu ugbu a. Aghaghị m ịnwale ma mee ihe nkiri egwu dị egwu mgbe ahụ, nke ahụ bụ ezigbo ihe ịma aka.
Dịka ị nwere ike iche n'echiche, ịnọ na nhazi mgbe ị na -eme ihe nkiri egwu bụ ihe na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ị dị ka ụmụaka na -eji blọk na ihe egwu egwu egwu. Na ngwụcha, mgbe ị bekọtara ya niile, ya na egwu na ụda, ọ bụ akụkọ dị iche, n'ezie. Echere m na ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na mmadụ apụọ! [ Ọchị .]
Ihe nkiri a ọ dị mfe nfe karịa nke mbụ?
N'ezie. Ee, ọ bụ oke ọkụ mmụọ ịchụpụ ụmụ agbọghọ maka nke mbụ, dịka ị nwere ike iche. Ọ bụrụ na ị gara ụlọ akwụkwọ ime ihe ma rịọ ka etinye gị na ịnyịnya ibu onye ọ bụla, ọ bụghị ihe nne gị ga -anya isi, echere m. [ Ọchị .] Ihe dị ka 70% nke ụmụ agbọghọ ahụ hapụrụ, ndị nwere nnukwu bọọlụ na nnukwu onyinye bụ Ashlynn [Yennie] na Ashley [Williams].
Mana ihe nkiri a ghọrọ nnukwu okwu na mgbe m na -eme ihe nkiri a na London, mmadụ niile chọrọ ịbụ akụkụ nke centipede. Ya mere, mgbe ha batara, ha malitere aka na ikpere ha ozugbo, jide isi n'isi ha, wee malite ime ihe nkiri. Enweghị m ọbụna ikwu ihe ọ bụla. Nke ahụ bụ ọnọdụ dị iche maka m ịnọ; na nke mbụ, ọ dị m ka chi m, aga m achọta ezigbo ndị na -eme ihe nkiri chọrọ ime nke ahụ?
Oge nke a, ị tụrụ anya ọkwa oke mkpali na nyocha?
Atụghị m anya na, mba. Enwetara m ozi ịntanetị site n'aka ndị mmadụ n'akụkụ ụwa niile na -arịọ ka m bata Ogige mmadụ 2 , na ụfọdụ chọkwara iri ezigbo ihe. [ Ọchị .] Yabụ na ị nwere ike were were were uche hụ ndị na -eme ihe nkiri.
ole ikuku ikuku mere
mfe uzommeputa icing eze na ude nke tartar
ị nwere ike tinye buttercream n'ime ngwa nju oyi